बाँके र कपिलबस्तुका एकएक जनामा कोरोनाको पुष्टि – Sadarline
नेपालगञ्ज : बाँकेमा फेरि एक जना पुरुषमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधवार दिउँसो जारी गरेको प्रेस नोटमा नेपालगञ्जका थप एक जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालगञ्ज वडा नं. ८ का ३३ वर्षीय पुरुषमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ ।
त्यस्तै कपिलबस्तु नगरपालिका वडा नं. ५ का २२ वर्षीय पुरुषमा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ । मन्त्रालयले दोस्रो पत्र जारी गरी उनमा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि गरेको हो ।
संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र स्वाथ्यकर्मीको निगरानीमा रहेको जनाइएको छ । बाँकेमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या २५ पुगेको छ भने नेपालमा हालसम्म २ सय १९ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सदरलाइनडटकम, कोहलपुर (बाँके) : बाँकेको कोहलपुरस्थित रोहिणी खोलामा सुत्केरी बोकेको एम्बुलेन्स खस्दा ६ जना घाइते भएका छ्न । मेडिकल कलेज कोहलपुरबाट चार दिने सुत्केरी बोकेर गइरहेको भे १ च ३१७१ नम्बरको एम्बुलेन्स कोहलपुर नगरपालिकाको वडा नं. १२ स्थित रोहिणी खोलामा खसेको हो । एम्बुलेन्स सडकदेखि झण्डै सय मिटर तल खोलामा […]
२७ श्रावण २०७८, बुधबार १३:११